Ankizy 17 Novoinoin’ny Manampahefana Nandritry Ny Hetsi-panoherana Ny Fakàna Tany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Janoary 2016 3:19 GMT
Fandevenana an'i Nasrudin Mohammed, mpanao hetsi-panoherana, maty tamin'ny Desambra 2015. Saripika an'ny Gadaa.com.
Raha kely indrindra, namono ankizy 17 ireo manampahefana Etiopiana ary nandratra marobe nandritra ireo hetsi-panoherana am-pilaminana nitakiana ny zo amin'ny tany, hatramin'ny Desambra 2015.
Nipoaka tamin'ny faran'ny Novambra tao Etiopia ireo fihetsiketsehana anoherana ny drafitra fanitàrana ny renivohitra hankany anatin'ny faritry ny foko Oromia. Nanomboka teo, mpanao hetsi-panoherana niisa 140 no voamarina fa maty teo am-pelatànan'ireo manampahefana avy amin'ny fitondràna. Tamin'ireo 17 tsy ampy taona novonoin'ny manampahefana dia ankizy latsaky ny 12 sy 17 taona ny ankamaroany. Taterin'ny fampahalalam-baovaon'olontsotra ihany koa fa marobe ireo ankizy mpianatra naratra tamin'ireny hetsi-panoherana ireny.
Ilay antsoina hoe “Drafitra Lasitra” , drafitra hanitàrana an'i Addis Abeba ho any Oromia, no toherin'ireo mpanao hetsi-panoherana izay matahotra ny hiafaràn'ilay fanitàrana naroso ho tonga hatramin'ny fanaovana antsojay mivantana amin'ny Oromo, sy fanilihana faobe ireo tantsaha avy amin'ny vondrom-poko Oromo hiala amin'ny taniny. Niaina fanilikilihana sy fanaovana antsojay isanandro vaky ny vahoaka Oromo, izay foko lehibe indrindra any Etiopia, tato anatin'ny dimy ambiroapolo taona farany. Tamin'ny Martsa, ny vinavina sasany dia mametraka ny isan'ireo Oromo migadra noho ny resaka politika ao Etiopia ho 20.000. Ireo sangany mitondra ny firenena, avy amin'ny antoko EPRDF, dia saiky avy amin'ny faritr'i Tigray (6% monja amin'ireo vahoaka 90 tapitrisa ao Etiopia ), izay any amin'ny ampahany avaratry ny firenena.
Mifanindran-dàlana amin'ireo ezaky ny fikambanana erantany toy ny Human Rights Watch, niasa nandrakitra sy nitahiry porofo momba ireny famonoana ireny ireo mpikatroka mafàna fo ao an-toerana, hatramin'ny fiandohan'ny Desambra. Tamin'ny herinandro lasa, Endalk Chala, manampahaizana momba ny media Etiopiana, sy i Abiy Atomssa, mpikatroka Oromo, dia namoaka sarintany misy ireo fahafatesana voamarina niainga avy amin'ny fanangonana ny vaovao teny ifotony, nahitàna tatitra avy amin'ireo olompirenena, mpikatroka mafàna fo, media sosialy, tambajotra mpampahalala vaovao ao an-toerana ary ny tolotra amin'ny teny Amharic ao amin'ny VOA.
Barihun Shibiru, taona fahavalo avy ao Shawa Andrefana no anisan'ireo tsy ampy taona azo isaina amin'ny rantsan-tànana nosamborina ary novonoina vantany vao tonga tany am-ponjan'ireo manampahefana. Natao ny 17 Desambra teo ny fandevenana an'i Shibiru.
Nanampy tamin'ny fandraketana sy ny fanamafisana ny fahafatesan'ireny ankizy tsy ampy taona ireny ihany koa ireo lahatsary nalefan'ny olompirenena tsirairay, nahitàna lahatsary iray izay nampiseho mpianatra nitangorona nanodidina ny vatàna mangatsiaka'i Lucha Gamachu, ankizy iray ao amin'ny taona faha-9 avy amin'ny Ambaratonga Faharoa Burqa Wanjo. Jawar Mohammed no nandefa ilay lahatsary tao amin'ny Facebook.
Angatahanay ianareo izay manana porofo amin'ny fahafatesana na fanjavonan'ireo mpanao hetsi-panoherana, mba mifandraisa aminay amin'ny editor@globalvoicesonline.org, azafady.
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny andiany fandrakofanay manokana ireo hetsi-panoheran'ny Oromo ao Etiopia. Fantaro bebe kokoa ato ny momba ireo hetsika ireo .